कर्मचारी, परामर्शदाता र ठेकेदारको मिलेमतोमा डिजाइनमै भ्रष्टाचार -योहोखबर
कर्मचारी, परामर्शदाता र ठेकेदारको मिलेमतोमा डिजाइनमै भ्रष्टाचार
काठमाडौ – काठमाडौ महानगरपालिकाको वडा नं. ६ बौद्धमा बन्न लागेको जुद्ध बारुण यन्त्रको भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्कामा काठमाडौ महानगरपालिकाको कर्मचारी, परामर्शदाता र ठेकेदारको मिलेमतोमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ । महानगरपालिकाको कर्मचारी र परामर्शदातासँग आर्थिक लेनदेन गरी ठेक्का परेको कुरा ठेकेदार स्वयंले बाहिर बताउँदै हिडेपछि ठेक्कामा ठूलो भ्रष्टाचार भएको तथ्य खुलेको हो ।
भ्रष्टाचार प्रकरणको नालीबेली
काठमाडौ महानगरपालिकाको खरिद इकाईले २०७४ माघ २६ गते जुद्ध बारुण यन्त्रको भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । महानगरपालिका कर्मचारीले भवन निर्माणका लागि आवश्यकता भन्दा अत्यधिक धेरै काठको परिमाण देखाउन लगाएर परामर्शदातालाई भवनको लागत तयार पार्न लगाएका थिए ।
उक्त सूचना आफू अनुकुलको ठेकेदारलाई चुहाएर आवश्यक नै नभएको काठमा बजारमूल्य भन्दा कयौं गुणा कम दर हालेर ठेक्का हत्याउन सफल भएको हो । महानगरपालिकाले ६३.९७ क्युबिक मिटर काठ मागेको थियो ।
ठेकेदार कविन्द्र महर्जनले काठमा बजारमूल्य भन्दा १३ गुणा कम मूल्य राखेर ठेक्का बोलकबोल गरेका थिए । बजारमा प्रति क्युबिक मिटर करिब २ लाख ६० हजार पर्ने काठमा कविन्द्र सिद्धार्थ जेबीले प्रति क्युविक मिटर २० हजार मात्र राखेका थिए । भवन निर्माणका लागि यत्ति धेरै काठ आवश्यक नै नपर्ने र अनावश्यक काठको परिमाण देखाएर ठेकेदारको मिलेमतोमा त्यसमा अति कम रकम बोलकबोल गर्न लगाएको एक ठेकेदारले बताए ।
ठेक्का पाएको कविन्द्र सिद्धार्थ जेबीले अरु सामानको भाउ भने बजार मूल्य भन्दा बढी हालेका छन् । यद्यपि आवश्यक नै नपर्ने काठको मूल्य १३ गुणा घटाएर ठेक्का बोलकबोल गरेपछि कुल लागतको करिब २४ प्रतिशत कम भएपछि महर्जनको कविन्द्र सिद्धार्थ जेबीले ठेक्का हत्याएको हो ।
कविन्द्र सिद्धार्थ जेबीले मूल्य अभिबृद्धि कर बाहेक ७ करोड ६२ लाख, ९ हजार ७ सय २९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।
खरिद ऐन अनुसार जुन निर्माण कम्पनीले सबैभन्दा कम मूल्यमा बनाउने बोलकबोल गर्छ, उसैले ठेक्का पाउने व्यवस्था छ । ऐनमा भएको यही छिद्रको आडमा परामर्शदातालाई डकुमेन्ट तयार गर्न लगाउने र अनावश्यक सामग्रीको परिमाण समेत देखाउन लगाएर ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा करोडौंको भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ ।
ठेकेदारले अति कम मूल्यमा बोलकबोल गरेको खण्डमा ठेकेदारलाई रेट एनालाइसिस पेश गर्न लगाई उक्त रेटमा खरिद गर्न सकिने विश्वस्त हुने आधार पेश गरेमा मात्र ठेक्का सकार्न सकिने नियम भएपनि महानगर कर्मचारीले काठमा १३ गुणा कममा बोलकबोल गर्ने निर्माण कम्पनीसँग यसबारेमा कुनै सोधपुछ नगरी ठेक्का स्वीकृत गरेको देखिन्छ ।
महानगरपालिका एउटाले अर्कोलाई पन्छाउँदै
महानगरपालिकाले यो भ्रष्टाचारको सवालमा एउटा विभागले अर्को विभागलाई पन्छाउने काम मात्र गरिरहेको छ । महानगरपालिकाका खरिद इकाई प्रमुख देवेन्द्र पोख्रेलले आफू प्रशासनिक कर्मचारी मात्र भएको र कुन परिमाण कति लाग्ने भन्ने कुरा खरिदको चरणमा गएपछि मात्र थाहा हुने बताए । उनले यसबारेमा शहरी पूर्वाधार निर्माण विभाग जिम्मेवारी हुने बताए ।
तर शहरी पूर्वाधार निर्माण विभागका इन्जिनियर प्रेम श्रेष्ठ भने शहरी पूर्वाधार निर्माण विभागले कामको कार्यान्वयनको जिम्मा मात्र हुने र यस विषयमा विपद व्यवस्थापन विभाग बढी जिम्मेवार रहने बताए ।
एकले अर्कोलाई पन्छाउन विपद व्यवस्थापनका प्रमुख इन्द्रमान सुवाल पनि चुकेनन् । उनले पनि आफ्नो विभागले महानगरपालिकासँग आवश्यकता भएको प्रस्ताव पेश गर्ने र महानगरपालिकाकाले रकम विनियोजन गरेपछि कहाँ, कसरी बनाउने भन्ने विषयमा समन्वय गर्ने काम मात्र भएकाले खरिद इकाई वा शहरी पूर्वाधार निर्माण विभाग नै बढी जिम्मेवार हुने बताए ।
महानगरपालिकाका कुनै पनि विभागले जवाफदेहिता बहन नगरिनुले पनि जुद्धबारुण यन्त्रको भवन निर्माणको शुरुमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएको प्रष्ट छ । खरिद इकाइले ठेक्कामा मागेजति काठको परिमाण साँच्चिकै आवश्यक पर्छ ? भवन निर्माणको क्रममा ठेकेदारले कति काठ प्रयोग गर्छ ? अनि बजार मूल्यभन्दा १३ गुणा कम लागतमा ठेकेदारले कहाँबाट खरिद गरेर ल्याउँछ ? भवन निर्माणको क्रममा सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
५६३ दिन अघि २०७५ आश्विन ०२ ०८:१९ मा प्रकाशित